सिल्टल युक्तिहरू प्रदान गर्दछ: मालवेयर आक्रमणहरूबाट एक WordPress साइट कसरी सुरक्षित गर्ने
WordPress धेरै हेकिंग प्रयासहरूको सामना गर्दछ। औसत 10 ब्लगर मध्ये7मध्ये कुनै पनि मैलवेयर संक्रमण वा ह्याकिंगको केहि प्रकारको अनुभव गर्दछ। त्यसकारण, तपाइँ कसरी आफ्नो साइट स्प्याम, हैकिंग र मैलवेयरबाट कसरी सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ?
म्याक्स बेल, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छ, कि सबैभन्दा आधारभूत तहमा, मैलवेयर संक्रमण र हैकिंग बीच कुनै फरक फरक छैन। सामान्यतया, हैकरहरूले तपाईंको साइटलाई लक्षित गर्दैन जब सम्म तपाई र साइबर अपराधीहरू बीचको व्यक्तिगत व्यक्तिगत मतभेदहरू नभएसम्म तपाईंसँग एक धेरै लोकप्रिय वेबसाइट छ। आखिर, कुनै पनि हैकरले तपाईंको साइटलाई एक मिनेट भित्र ल्याउन DDOS र botnets संलग्न गर्न सक्छ।
स्वाभाविक रूपले, साझा होस्टिङमा होस्ट गरिएका ब्लगहरू विशेष गरी हानिकारक आक्रमण गर्न असुरक्षित हुन्छन्, र त्यहाँ केही वेबमास्टरहरू छन् जुन यस्ता आक्रमणहरूको विरुद्ध केही गर्न सक्छन्। अहिले सम्म, तपाईं शायद तपाइँको सीट को किनारा मा बैठे हो र आफ्नो साइट को हरेक मिनेट को जाँच गर्न को लागी यो ह्याकड गरिएको वा मैलवेयर संग संक्रमित छैन सुनिश्चित गर्न को लागी हो। आराम गर्नुस्, तपाईंको साइटले केही हानिकारक नभएसम्म असुविधालाई हटाउन वा संक्रमित हुने गर्दछ।
अब तपाइँ ह्याकरहरू निश्चित हानिकारकसँग साइटहरू लक्षित गर्नुहुन्छ, यी कमजोरीहरू के हुन्? सुरु गर्नका लागि, धेरै ब्लगिङहरू र वेबमास्टर्सले साझा होस्टिङ प्रयोग गरे जुन तिनीहरू सुरू गर्छन्। जबकि होस्टिंग साझेदारी गर्दा एक कम महंगी व्यवस्था हो, यसको स्प्यामर र हैकरहरु लाई आकर्षित गर्ने क्षमता छ।
चूंकि तपाईको साइटको रूपमा एकै सर्भर प्रयोग गरी साझा होस्टिङमा थुप्रै ब्लग मालिकहरू छन्, त्यहाँ सधैँ सम्भव छ कि केही मध्ये न्युयोर्कहरू छन्। यो मतलब छ कि यी नयाँ किशोरीहरू एक कमजोर पासवर्ड हुन सक्छ, उनीहरूको कम्प्युटरले ट्रोजन बन्द गर्न सक्छ वा ह्याकिंगको विरुद्धमा उनीहरूको साइट सुरक्षित गर्दैन। त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, हैकरलाई मात्र कमजोर साइट मार्फत सर्भरको पहुँच गर्न आवश्यक छ, एक भाइरस स्थापना गर्नुहोस् जुन चाँडो सबै साइटहरू र ब्लगहरूमा सर्भरमा होस्ट गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं एक बजार वा ब्लगर हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग केही अनलाइन फोरमहरूमा पर्ख्ने सम्भव छ। तपाईलाई थाहा छैन कि यी केही साइटहरू संक्रमित छन् तर थाहा हुँदैनन् तिनीहरू तिनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूमा मालवेयर फैलिरहेका हुन्छन् वा बिरामी-मनपराएका व्यक्तिहरूद्वारा निर्मित हुन्छन्।.
साधारणतया, हैकरहरुले तपाइँको साइटलाई लक्षित गर्दैनन् जब सम्म तपाईसँग केहि अधूरो व्यवसाय छैन। यद्यपि, साइबर अपराधकर्ताहरू सधैं कमजोर साइटहरूको लागि स्क्रोइङ गर्न सहमत छन्। एक पटक उनीहरूलाई ब्लकहरूलाई पहिचान गर्नेहरू चिन्ताजनक हुन्छन्, तिनीहरू तिनीहरूका सर्भरहरू मालवेयरसँग संक्रमित हुन्छन्, जुन त्यस सर्भरमा होस्ट गरिएको अन्य साइटहरूमा फैलन्छ। जस्तै Source - races hats online uk stores.htaccess मोड हैक जो सजिलै संग विशिष्ट कोड र फाइलहरु को परिमार्जन को द्वारा सफाया गरिन्छ, मैलवेयर देखि छुटकारा छ कि यो तपाईंको विषयों, लिपियों, र डेटाबेस भ्रष्ट गर्न देखि छुटकारा मुश्किल छ।
त्यसकारण, तपाईं कसरी आफ्नो साइट मैलवेयरबाट सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईंको साइट संक्रमित छ, त्यहाँ सम्भव छ कि तपाईंको पासवर्ड सम्झौता भएको सम्भव छ। यस समस्यालाई सुधार गर्न तपाईंको सीपेलमा जानुहोस् र तपाईंको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंको पासवर्ड सम्झौता गर्न कठिन छ सुनिश्चित गर्न, नम्बरहरू, विशेष क्यारेक्टरहरू, सानो अक्षर र ठूला अक्षरहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
एकपटक तपाईंले आफ्नो पासवर्ड परिमार्जन गर्नुभएपछि तपाईको लग इन पासवर्ड पनि परिवर्तन गर्न विचार गर्नुहोस्। बस सीप्यानल जस्तै, क्यारेक्टरहरूको अनुमान लगाउन गाह्रो हुन्छ।
तपाईंको साइट जगेडा गर्दा साइटले सम्झौता गर्दा सामग्रीको हानि रोक्नको महत्वपूर्ण तरिका हो। पूर्ण जगेडाका लागि, ब्याकअप अप Buddy, WordPress ब्लगहरूको लागि एक आसान प्लगइन प्राप्त गर्न विचार गर्नुहोस्।
सुरक्षा प्लगइन स्थापना गर्नुहोस्
तपाईंको ब्लग ब्याकअप गर्न बाहेक, सुरक्षा प्लगइन स्थापना गर्न विचार गर्नुहोस्। यसमा समावेश छ:
डब्ल्यूपी सिक्योरिटी स्कैनर
डब्लुपी सुरक्षा स्क्यानर एक वेबसाइट डिफेंडर द्वारा डिजाइन गरिएको एक लाइट सुरक्षा स्क्यानर हो। प्लगइनले तपाईंलाई डेटाबेस तालिकालाई अनुमान गर्न केहि कठिन गर्न परिवर्तन गर्न दिन्छ।
बेहतर WP सुरक्षा
प्लगइनले वर्डप्रेस सुरक्षा विशेषताहरू र प्रविधिहरू लिन्छ र तिनीहरूलाई एकल प्लगइनको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। बेहतर WP सँग धेरै ब्लगिङहरू छन् र ब्लगरहरूको लागि कलको पहिलो पोर्ट हुनुपर्दछ।